Dell Data Recovery: Olee naghachi Data si Dell laptọọpụ
> Resource> Naghachi> Dell Data Recovery: Olee naghachi Data si Dell laptọọpụ
Olee otú m nwere weghachite Data si a Dell laptọọpụ?
M nwere Dell Inspiron laptọọpụ. Ụbọchị ndị a ọ efehe nwayọọ nwayọọ, n'ihi ya, m kpebiri na m ọcha ya. O di nwute na m carelessly ehichapụ ụfọdụ bara uru faịlụ. Dị ụzọ ọ bụla na m nwere ike gbapụta ha? Biko nyere!
Otu ngwọta bụ na-elele egweri biini na gị Dell laptọọpụ. Ọ bụrụ na gị na-ehichapụ faịlụ ndị luckily na ya, i nwere ike weghachite ha na ala. The ọzọ ngwọta bụ iji Dell laptọọpụ data mgbake omume ma ọ bụrụ na gị na-ehichapụ faịlụ-adịghị na egweri biini.
Wondershare Data Recovery Bụ otu n'ime gị mma nhọrọ naghachi data si Dell laptọọpụ. Ihe ọ bụla kpatara gị Dell laptọọpụ faịlụ furu, dị ka ebumnuche ma ọ bụ na mberede nhichapụ, ike mbanye ma ọ bụ nkebi formatting, usoro njehie, ị nwere ike weghachite ha na Wondershare Data Recovery effortlessly. The mfe na-eji na n'ihe ize ndụ-free atụmatụ nke a na ịba uru ka Dell data mgbake usoro enweghi mgbu. Ị dị nnọọ mkpa pịa a ugboro ole na ole na-agbake a dịgasị iche iche nke faịlụ site na gị Dell laptọọpụ, gụnyere foto, vidiyo, akwụkwọ faịlụ, email faịlụ, ọdịyo faịlụ, Archive faịlụ, wdg
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery n'okpuru.
Igosi Dell Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi data si a jiri Dell laptọọpụ, ị nwere ike agbalị na-ewere ya ike mbanye na jikọọ na ya ọzọ kọmputa na-eme mgbake.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite Dell laptọọpụ data mgbake
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery na gị Dell laptọọpụ, ị ga-ahụ a mmalite window na 3 mgbake ụdịdị. Ị nwere ike gụọ zuru ezu ntuziaka nke ha ka ha na-amụta otú ha na-arụ ọrụ.
Ebe a, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode inwe a-agbalị.
Cheta na: Biko adịghị wụnye ihe omume na gị Dell laptọọpụ si nkebi ebe data furu efu.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Dell laptọọpụ si nkebi anya n'ihi na furu efu faịlụ
Ebe a ị dị nnọọ mkpa họrọ nkebi ị chọrọ iji weghachite data site na pịa "Malite" na-amalite ịgụ isiokwu.
Ọ bụrụ na gị faịlụ furu n'ihi nkebi formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data si Dell laptọọpụ
Mgbe Doppler, niile recoverable faịlụ ga-egosipụta na omume window. Ị nwere ike ịlele ha site "File Pịnye" ma ọ bụ "Ụzọ". I nwekwara ike ihuchalu hụrụ oyiyi tupu mgbake kwa.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ ihe ị chọrọ na kụrụ "Naghachi" button na-azọpụta ha azụ gị Dell laptọọpụ.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ ha mbụ na ọnọdụ.
1 Ihe mere ihe mere ị pụrụ naghachi furu efu data si Lenovo laptọọpụ bụ na ndị a furu efu faịlụ ndị dị nnọọ keerughi na gị Lenovo laptọọpụ. Ha ga-efu na-adịgide adịgide nanị mgbe ọhụrụ data na-edochi ha.
2 Ọ bụrụ na gị Lenovo nwere ike agaghịkwa reboot, ị ka pụrụ naghachi data site na ya site na-ewere ya ike mbanye na ejikọta ya na ọzọ na kọmputa.
Olee otú Igosi Pretec Data Recovery
Olee otú Naghachi ehichapụ Pictures si Micro SD Kaadị
Nkuzi nke Mac Kaadị ebe nchekwa Photo Recovery
Laptọọpụ Data Recovery: Olee naghachi Data si laptọọpụ Draịvụ
Soundtap Streaming Audio Recorder maka Mac OS X EL Capitan
5 ụzọ naghachi gị furu efu faịlụ site na a pen mbanye
Top 5 Photo Recovery Software maka Windows na Mac
Olee otú Naghachi Photos si Canon EOS 7D Digital Igwefoto
Olee otú Igosi PQI USB Flash Drive Iweghachite
Olee otú Igosi Canon CRW Photo Recovery
Olee otú Naghachi ehichapụ / Lost Pictures